Iindlela ezili-10 zokujonga kuThengiso lweDijithali yowama-2016 | Martech Zone
Iindlela ezili-10 zokuBukela kwiNtengiso yeDijithali yowama-2016
NgoLwesihlanu, Matshi 18, 2016 NgoLwesihlanu, Novemba 17, 2017 Douglas Karr
Sine-podcast enkulu yentengiso eza apho sixoxa ngotshintsho olumangalisayo olwenzeka ngaphakathi kwendawo yentengiso yedijithali. Kodwa ukuthengisa kwidijithali kuyaqhubeka nokuhamba notshintsho olumangalisayo ngokunjalo. Le infographic evela Cube ibonisa ukuba abarhwebi kufuneka baqwalasele ngo-2016.
Nazi iindlela ezi-10 kwiNtengiso yeDijithali
Buyela kwi Investment -I-infographic iyathetha ngokugqitha kwimetric yamampunge enje ngezithuthi kunye nezabelo, kodwa ndiyakholelwa ukuba imeko yokubukela iphuculwe imbeko Ngaphakathi kubahlalutyi izixhobo.
Cinga ngeHlabathi endaweni yeNdawo -Iilwimi ezininzi, ukuguqulelwa kwexesha-lokwenyani, kunye nokwenziwa kwamanye amazwe konke kwenza ukuba urhwebo luye kwilizwe jikelele. Ungayichazanga eyokuba ukuhambisa ngenqanawa sele kuyayixhasa.
zobuqu Ukubandakanyeka kunye nokuguqulwa kwamaxabiso kuyanda xa imiyalezo yenziwa ngokobuqu ngokusekwe kwixesha, indlela yokuziphatha, inani labantu kunye nendawo ahlala kuyo umthengi.
Ukuvela kweSayensi yeDatha - Itekhnoloji yedatha enkulu ngoku iyafikeleleka ebantwini kunye namashishini amancinci naphakathi aphakathi afumana ukufikelela kwidatha yokuqikelela abangazange bacinge ukuba inokwenzeka.
Ukubeka phambili ukuBekwa phambili - ii -apps zeselfowuni, imidiya yoluntu, ividiyo, ukukhangela okuhamba-hamba, ukukhangela indawo okusekwe kuyo… indawo eselfowuni ngoku ingumbindi wokuzibandakanya kwi-Intanethi.
Ukuthengisa -Ukufuna abantu abangabakho amathemba akho kunye nokusebenza nabo ukuphembelela ukuba abaphulaphuli baneziphumo ezintle njengoko kuboniswa kunye nokuzibandakanya kuphele.
Ukungabi Namava kunye neNtle -Cube ikhankanye nje inyani, kodwa andiqinisekanga ukuba izakuba yinto enkulu njengeyona inyusiweyo. Isakhono sokwenza ukubandakanyeka kwethu kwilizwe esiphila kulo kubonakala ngathi linamathuba amaninzi kwimbono yam.
Isalathiso seApp -Izixhobo zokwakha ukunceda iindwendwe kufuneka zibesembindini wentengiso nganye yedijithali yenkampani nganye. Sakha i isixhobo sokuguqula izixhobo umenzi weekhemikhali oye waba yeyona nto ibalaseleyo kushishino lwabo kwaye esetyenziswa ngumntu wonke kwimakethi yabo ekujolise kuyo-ekhokelela kulwazi olukhulu kunye nokuguqulwa.
Itekhnoloji enxitywayo kunye neIoT -Ukuthengisa kwasekhaya kunye nokujolisa kubuchwephesha obunxibayo kunika ithuba elihle kwiinkampani zombini ukuba zinxibelelane kwaye zityhale umyalezo ngokuthe ngqo apho ithemba okanye umthengi ethathele ingqalelo.
Intengiso ye-Omni-Channel Ukudityaniswa kwentengiso ekwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi iguqukile. Kude kubuyise nentengiso ethile yesiko apho umyalezo wakho uviwe khona ngenxa yokuba kungekho khuphiswano lungako.
tags: 2016Nyaniso eyongeziweyoidatha enkuluyesayensi yolwaziiindlela zentengiso yedijithaliurhwebo lwehlabathiukuthengisa okunempembelelointanethi izintoyasebukhosi-UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiisalathiso sosetyenziso lwefowuniapps mobileNgokwezifisoukubuya kutyalo maliROIiintsingiseloiindlela zokubukelaubunyaniItekhnoloji yokunxiba
I-Scribble Live: UXwebhu, uCwangciso kunye nokuFezekisa isiCwangciso sakho soMxholo
Ubalo lwabantu kwi-Intanethi yokuthenga ukutya kwi-Intanethi